Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura Oo La Furay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBaşakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura ayaa loo furay Adeegga
Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura ayaa loo furay Adeegga
21 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
basaksehir cam iyo sakura cosbitaalka magaalada ayaa la furay
Madaxweyne Erdoğan wuxuu baaritaano ka sameeyay Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura kahor xaflada. Helitaanka macluumaadka maamulada, Erdogan, Wasiirka Caafimaadka Dr. Fahrettin Koca waxaa weheliyay dad kale oo danaynaya.
Khudbaddiisii ​​furitaanka, Erdoğan wuxuu rajeynayay in isbitaalka, oo loo adeegsaday raysal wasaaraha Japan Shinzo Abe, uu faa iido u yeelan doono dalka, dalka iyo quruxda badan ee Istanbul, wuxuu yiri: "Maanta waxaan ku dari doonnaa mid cusub oo saaxibtinimo qoto dheer leh oo xiriir wadaag ah oo Turkiga iyo Japan ah. Waxaan go'aansanay magaca cosbitaalkayagu inuu yahay Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura, anagoo kaashanayna labada wadan. Waxaan u soo qaadnay shaqo kale oo noqon doonta mid ka mid ah taallada sharafta leh ee Istanbul oo dalkeenna loo adeegsado kaabayaasha teknolojiyada, dhismaheeda, goobta, tas-hiilaadyada iyo astaamo kale. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in jawiga iyo cisbitaalka saaxiibtinimada tamarta uu yahay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee iskaashiga dowliga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, Erdogan wuxuu sheegay in shaqadani ay door muhiim ah ka cayaari doonto la dagaalanka faafitaanka Kovid-456, gaar ahaan 2 682 sariirood, 725 oo ka kooban cutubyo daryeel degdeg ah, 90 qolal polyclinic ah iyo 19 qol qalliin oo qalliin ah. sheegay.
“Istanbul waxay noqotay xarun caafimaad oo caalami ah”
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sheegay in marka la gaaro awooda buuxda ee cusbitaalka, oo u adeegi doonta guud ahaan 107 laamood, la qorsheynayo in la qaado 35 kun oo bukaan socod maalin walba iyo in la sameeyo 500 qalliin oo muuqaal ah.
Cisbitaalkeena, oo leh 8 helicopter iyo sidoo kale baarkin gaari oo loogu talagalay 134 kun 3 gawaarida, ayaa u adeegi doona martidayada shisheeye sida ay ugu dhowyihiin garoonka diyaaradaha Istanbul iyo sidoo kale qarankeena. Si kale haddii loo dhigo, Istanbul waxay sidoo kale noqotay xarun caafimaad oo caalami ah. ”
"Waxaan u dirnay qalab caafimaad iyo waji-bixinno 82 dal"
Intii lagu guda jiray howlaha masiibada, marka lagu daro Turkiga si ay u daboolaan baahiyahooda, sahayda caafimaad ee ka kooban walaalaha nool iyo kuwa saaxiibka ah ayaa sii wadaya in ay u diraan Gargaarka, “Waxaan u dirnay sahay caafimaad 82 dal iyo masar. Waxaan aaminsanahay in masiirkayaga iyo murugadeennu ay yihiin caadi, waxaan sii wadi doonnaa abaabulka fursadaha aan u haysanno aadanaha oo dhan ka dhanka ah cudurka.
"Waxaan rajeynayaa in isbitaalku u keeno caafimaadka iyo fayo qabka dadka reer Istanbul"
Isaga oo ka hadlayey xafladii furitaanka ee uu ka soo qayb galay oo uu ku qaatay qaab muuqaal fiidiyow ah, Raiisel wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa yidhi, “Waxaan u rajaynayaa cisbitaalkan oo waliba leh magac sakura, kaas oo ah astaanta Japan, oo leh geed geedkiisu ku xardhan yahay caafimaadka iyo tamarta, wuxuu caafimaadka iyo wanaag u keenaa dadka reer Istanbul weligood.”
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin ninkeeda khudbaddiisa ka jeedisay xafladda, oo ilaalinaysa qof walba xuquuqda uu u leeyahay caafimaadka, waqtiga iyo tayada daryeelka caafimaad ee qof walba oo baahan ayaa si fudud u sheegay in Turkigu uu heli karo tallaabo tallaabo ah.
“Isbitaalka, oo la furay, wuxuu ka mid yahay isbitaalada ugu waa weyn adduunka. Isagoo sheegay in xaruntan caafimaad aysan aheyn kaliya isbitaal, Koca wuxuu yiri, “waa magaalo isbitaallo ka kooban 8 isbitaal, oo midkasta uu ku takhasusay arimaheeda. 426 sariiraha daryeelka degdegga ah waxay leeyihiin 2 sariirood. Waxa jira 682 qol oo bukaan socodka ah. Waxay leedahay 725 qol qalliin, oo 3 ka mid ahi ay si buuxda u qalabaysan yihiin, hybrid. Waxaa jira 90 qol oo dhalmada iyo 28 cutub oo gubasho leh oo leh sariiro. Cusbitaalkan ayaa awood u leh inuu u adeego 16 kun oo bukaan maalintii. Waa dhismaha ugu weyn ee adduunka ku yaal oo leh 35 go'itaan seismic. Sidan, dhammaan adeegyada ay ka mid yihiin dhulgariirku waxay awood u yeelan doonaan inay sii socdaan ayadoon la carqaladeyn.
Turkiga 18 sano, 87 kun 512 awooda sariirta ayaa lasiiyay
18-kii sano ee la soo dhaafay, tilmaamaha iyo taageerada Madaxweyne Erdogan ee la xiriirta 636 cusbitaal oo ah dhismeyaasha iyo Turkiga, 87 kun 512 sariirta awooda ayaa heleysa taasoo wareejineysa Wasiirka ninkeeda, “tirada guud ee xarumaha caafimaadka ee la dhisi doono muddadan, waxaa laga helay 3 kun 345. Laga soo bilaabo sanadkii 2016, 10 isbitaal oo magaalada ah ayaa shaqo bilaabay. Annaga oo kaashanayna Cusbitaalka Başakşehir, waxaan u xilsaaraneynaa cisbitaalkayaga 11-aad ee magaalada. Dhismaha 6-da cosbitaal ee magaalada ayaa socda. ”
Wasiiradii Sayidka, 2023 oo ku sugnaa cisbitaalka magaalada lugaynaya ee caafimaadka xoogan ayaa turkiga ka dhawaajiyay in bartilmaameedkooda la qaadan karo maadaama ay tahay meesha ugu dambeysa ee aroosadda iyo adeegyadeeda.
“Turkiga qarniga 21aad wuxuu daabici doonaa magaca dalka caafimaadka”
Caafimaadka caalamiga ah ee Turkiga iyo tayada adeegyada caafimaadka iyo dalxiiska oo leh jihooyin gaar ah oo loo sameeyo meel muhiim ah oo laga helo waxbarashada caafimaadka waa tallaabo muhiim ah oo ay qaaday Wasiirka iyadoo ku nuuxnuuxsatay ninkeeda, waxayna tiri:
“Isbitaalada magaalada waxay gacan ka geysan doonaan in dalkeenna uu u furi karo awooddeeda adduunka. Waxaan leenahay kaabayaal ka wanaagsan ku dhawaad ​​waddan kasta oo hogaamiya dalxiis caafimaad. Sida aan had iyo jeer sheegnay, isbitaalada magaaladeena ayaa ah meesha ugu dambeeyay ee martigelinta iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad casri ah iyo raaxo jireed. Si kastaba ha noqotee, waa shaqaalaheena caafimaad ee tayada leh ee ka shaqeyn doona gudaha dhismayaashaas. Maalin walba nidaamkayaga daryeelka caafimaad ee ka xoog badan adduunka qarniga 21aad wuxuu daabici doonaa magaca Turkiga inuu yahay dal caafimaad. "
Isbitaalka Magaalada Başakşehir Magaalada Istanbul ayaa la furay
Basakşehir Metro Kirazlı Başakşehir ayaa lagu furi doonaa guga 2012
Wasiir Karaismailoğlu wuxuu baaray Wadooyinka Cusbitaalka Magaalada Başak Hospitalehir
Isbitaalka Tareen ee Iskuulka Magaalada Eskisehir wuxuu bilaabayaa adeegga Berrito
Adeegga Tareenka ee Isbitaalka Magaalada Eskisehir ayaa bilaabmay
Dhamaan Xaqiiqda Ku Saabsan Isbitaalka Başakşehir
Saldhigga tareenka isbitaal ee magaalada ayaa la dhigay Eskisehir
Philips Turkey, Adeegyada Sawirrada Sawirka ee Isbitaalka Magaalada Basaksehir ayaa Noqday Shuraako
Waa maxay Sakura micnaheedu?
Mersin, Iskaashatada Iskuulada Magaalada ee Bilawday
Bakhtiyaanasiibka Bakhtiyaa-nasiibka ee Kiptaş Silivri Marxaladda 3aad Guriyeynta Bulshada Berri
Waa maxay Xaaladda ugu dambaysa ee Khadka Tooska ah ee Gebze Darıca?
Xubinnimada Ururka Isboortiga Hawada ee Yurub (EASA)
Maanta taariikhda: 5 June 1939 Tbilisi oo la xidhiidha wado tareen
Duullimaadyada ayaa si xawli ku bilaabmay madaarka Milas-Bodrum
$ 201 Milyan oo Taageero Dhoofinta
Go'aanka Awoodda Rakaabka ee Baska iyo Metrobus ee Magaalada Istanbul
Taageero laga helo Wadada Wadnaha ilaa Ku-deeqidda Dhiigga
Codsiyada Diiwaan-galinta Hore ayaa Loo Bilaabay Beeraleyda si Looga Taageero Seeraha Hungari Vetch
Kalluumeysiga Bullu Tuna wuxuu bilaabmay
Waxaa la dhisi doonaa 4 kun oo 775 Kiiloomitir Wadada Baaskiiladaha ah
Kastamka Habur iyo G Frerbulak Gates ayaa dib loo furay Gaadiidka Xamuulka
Ilaa 40 Kun oo Liras oo Taageero ah Dakhliga Dakhliga Gaarka ah ee Dakhliga
Gargaarka weyn ee Warshadaha Ciyaaraha
TCDD 2 Agaasime Goboleed Kayaş (Bariga) Kabax Shears Lalahan (Galbeedka) Kabax Shears, Saamiyada Nidaamka Kaabayaasha Nidaamka, Tender Result Result TC State Railways Enterprise [More ...]
Ilaa iyo saaka, duulimaadyo gudaha ah oo qorsheysan ayaa ka billowday Milas-Bodrum Airport. Maalinta koowaad, 20 duulimaad ayaa laga diyaariyey garoonka diyaaradaha, halkaas oo laga qaadayo dhammaan tallaabooyinka ka hortagga masiibada. Waxaa Diyaariyey TAV Madaarada [More ...]
Diyaaradda Gaadiidka A400M ee Militariga, oo ay si firfircoon u adeegsadaan Taliska Ciidamada Cirka Turkiga, ayaa heshay shahaadada markab dagaal oo isku mar ah. A400M Generation cusub oo ay soo saartay shirkadda 'Airbus' [More ...]
Darawalada IETT, ajendaha la doonayo in lagu abuuro ee ku saabsan maaskaro la iibsaday muddadii masiibada waa qasab, mana ahan sheegashooyin ula kac ah oo iska indha tiraya ujeeddada. Hawsha ugu adag inta lagu jiro cudurka faafa [More ...]
Imtixaanku wuxuu ka bilaabmayaa Isbitaalka Magaalada Eskisehir
3 Khadka Cusub ee Baska ee Gaadiidka Isbitaalka Magaalada King
Xakamee Shaqada wadada Isbitaalka Manisa